Tawhiida Archives - Page 6 of 12 - Ibsaa Jireenyaa
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 4.3
September 8, 2019 Sammubani Leave a comment
D-Bu’aa namni Maqaa “Al-Hayy fi Al-Qayyuum” beeku fi itti amanuun argatuu
1-Rabbii Tokkicha qofa gabbaruu– akkuma barreefamoota darban keessatti ilaalle, “At-Ta’abbud (gabbaruu) jechuun jaalala daangaa ol’aanaa irra gahee fi of gadi xiqqeessu daangaa ol’aana irra gaheedha. Jecha biraatin gabbaruu jechuun jaalala guutuu fi of gadi xiqqeessuun Gooftaaf ajajamuudha.
September 7, 2019 Sammubani Leave a comment
C.Ibsa Aayaata (keeyyattoota) Qur’aanaa muraasa maqaalee kanniin of keessaa qabanii
Kutaa darbe irraa itti fufuun aayaata Qur’aanaa maqaalee Al-Hayy fi Al-Qayyuum of keessaa qaban ni ibsina. Maddi guddaan maqaalee fi sifaata Rabbal aalamiina itti beekan Qur’aana waan ta’eefi. Maqaan Al-Hayy jedhu Qur’aana keessatti si’a shan kan dhufe yommuu ta’u, Al-Qayyuum immoo si’a sadii dhufe. Al-Hayy fi Al-Qayyuum walitti hidhamuun 2:255, 3:2, 20:111 keessatti dhufanii jiru. Addatti Al-Hayy 40:65 fi 25:58 keessatti dhufee jira. Yeroo darbe 2:255 (Aayata Al-Kursiyy) waan ibsineef aaya tana lamu irraa hin deebinu. Amma kan hafan ilaalla.
September 1, 2019 Sammubani Leave a comment
Rahmani Rabbii (subhaanahu wa ta’aalaa) bal’aa wantoota hundaa haguugudha. Garuu akkuma yeroo darbe jenne rahmanni Isaa gosa lama. 1ffaa-rahmata waligalaa uumamtoota hundaa haguuguudha. Kuni qananii qaamaa kanneen akka nyaataa dhugaati, uffata, geejjibaa fi kkf. 2ffaan immoo rahmata addaa kan ta’eedha. Kuni namoota Rabbii Guddaa Olta’etti amananiif qofa kan ta’uudha. Kanneen akka iimaana, beekumsa, dukkana keessaa gara ifaatti baasu, tasgabbii qalbii, rizqii halaalaa, adabbii addunyaa fi Aakhirah jalaa isaan baraarun ganda qananii tan taate Jannata isaan qubsiisu fi kanneen biroo. Rahmanni guddaan namni barbaadu rahmata lammataa kana. Wanti asi gaditti hasoofnus akkaata rahmata lammataa kana itti argataniidha.
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 3.3
August 31, 2019 Sammubani Leave a comment
D-Faayda namni Maqaa “Ar-Rahmaan, Ar-Rahiim” beeku fi itti amanuun argatu
Kutaa darbe keessatti hiika fi aasaara (bu’aa) maqaa kanniin lamaani ilaalle turre. Yaadannoof, Ar-Rahmaan rahmataan kan ibsamu yommuu ta’u, Ar-Rahiim immoo umamtootaf rahmata kan godhuudha. Aasaarri (bu’aan) rahmata Rabbii uumamtootaaf waan gaarii kennuu fi waan badaa isaan irraa deebisuun guyyaa guyyaan ni mul’ata. Qananiin namni argatu hundi bu’aa rahmata Rabbii irraayyi. Wanti badaan isarraa deebi’e hundi bu’aa rahmata Isaa irraayyi. Kanaafu, namni kana yoo beeke fi itti amanee, faayda baay’ee argata. Isaan keessaa:
Maqaalee Rabbii (Subhaanahu)-Kutaa 3.2
August 25, 2019 Sammubani Leave a comment
C.Aasaara (bu’aa) rahmata gochuu irraa mul’atuu
Kutaa darbe keessatti bu’aa rahmata Rabbii (subhaanahu) irraa mul’atu ilaalle turre. Isaan keessaa qananii kaasne jirra. Qananii jalatti roobni, jijjiramni halkanii guyyaa, adeemsi aduu fi ji’aa qananiwwan rahmata Isaa agarsiisanidha. Namni kanniinitti yoo sirritti xinxalli rahmanni Rabbiin ilma namaatiif godhe isaaf ifa ta’a. Ammas, asi gaditti qananiiwwan armaan olii wanta caalu yoo itti xinxalle, daran rahmata Isaa ni hubata.
August 24, 2019 Sammubani Leave a comment
Bismillah! Qalbiin namaa tuni wanta yeroo hundaa itti tasgabbooftu fi boohartuu barbaaddi. Addummeen (kophummaan) ishiif diina. Wanti guddaan qalbiin itti tasgabbooftu “jaalala”. Garuu jaalala akkamiitu qalbiif tasgabbii fi booharti addaan hin cinne kennuufi danda’aa? Gaafii kanaaf deebii sirrii argachuun tasgabbii fi boohartii dhugaa namni hunduu dharra’u argachuudha. Akkasi miti ree?
August 12, 2019 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti maqaa “Allaah” jedhu hiika isaa waliinii fi sifaata inni of keessatti qabate ilaalle turre. Har’as itti fufuun mata-duree hafee ilaalla.
Ibsa Aayatul Kursiyyi